Ireo fahazarana 7n’ireo olona tena mahavita azy – Malag@sy Miray
Ireo fahazarana 7n’ireo olona tena mahavita azy
Misy soatoavina sy fahalalàna maro tsara ifampizarana nefa tazonin’ireo izay mahay sy mahafantatra azy nefa mety mahasoa raha iainan’ny olona rehetra. Anisany amin’ireny fahalalàna ireny ohatra ity « Fahazarana fiton‘ireo olona tena mahavita azy » ity. Amin’izao fotoana dia tena tsara ampiaharina amin’ny fifaneraserana arak’asa sy ny fifandraisan’ny samy olombelona ny vonto atiny. Misy ny mihevitra fa natokana ho an’ireo olona ambony sy natao hitarika ihany ny zavatra fonosiny saingy isika rehetra dia natokana handroso sy hiavotra daholo.
Amerikana iray izay antsoina hoe Stephen Covey no nanoratra ny boky sy nanaparitaka ny fahaizana ka maro ireo olona nahita soa tamin’izany. Tiako ifampizarana aminareo eto izany satria anisan’ny fototra iray ahafahana manatsara ny fifaneraserana amin’ny mpiara-belona sy ny mpiara-miasa.
Fahazarana voalohany : Mivonona alohan’ny fitrangan-javatra
Fahazarana faharoa : Fantao mialoha aiza no tianareo haleha
Fahazarana fahatelo : Omeo laharam-pahamehana izay tena maika
Fahazarana fahaefatra : misaina hatrany hoe samy miara-mandresy
Fahazarana fahadimy : Ataovy aloha izay hahazoana (ny hafa) izay vao mikatsaka ny ho azo (n’ny olona)
Fahazarana fahaenina : Araraoty ny voka-tsoa azo miaraka
Fahazarana fahafito : Aranito ny fahaizana
Somary nanosarotra ny nandika ireo fahazarana ireo tamin’ny teny malagasy satria dia maro no mbola tsy ao anatin’ny kolotsaina sy voambolantsika. Anisan’izany ohatra ny teny hoe « proactif » izay nadika tsotra amin’ny alalan’io fahazarana voalohany io, anisan’izany koa ny teny hoe « synergie » izay nanazavana ny fahazarana fahaenina. Mbola mila ampiharina sy zaraina amin’ny manodidina hatrany amin’ny faran’ny ambanivohitra any ireo mba ahatsapan’ny olona fa tsy miasa mafy amin’ny tsy misy dikany fa miasa mba hahazo fahasoavana no sady fahasoavana ihany koa ny asa.
Raha ny tena marina dia fandrantoana farafahakeliny telo andro no ianarana ireo fahazarana ireo. Ary ny tena marina dia tsy tokony ampahafantarina ny hafa akory ireo fahalalàna ireo saingy rehefa nozohina ny Aterineto dia maro no miresaka azy ka tsy maninona fa ifampizarana raha mahasoa ny malagasy. Fantatra fa vitsy koa tsinona no handranto azy avy eto.
Ao anatin’izany fampianarana izany dia misy ihany koa ny fanavahana ny atao hoe MAIKA (urgent) sy ny hoe MAVESA-DANJA (Important)
Afaka manao efajoro iray isika ka amin’ny lafiny mitsivalana dia ho zaraina roa dia apetraka amin’ny zarany voalohany ny MAIKA ary amin’ny zarany faharoa ny TSY MAIKA. Amin’ny lafiny mitsangana kosa dia apetratsika eo ny MANAN-DANJA sy TSY DIA MANAN-DANJA. Tsy dia azo an-tsaina loatra angamba fa ataoko anaty kisary eto ambany.
Amin’io dia hitantsika fa misy ny zavatra MAIKA no sady MANAN-DANJA. Anisan’izany ohatra ny krizy, ny olana mavesatra, ny teti-kasa misy fotoana tsy maintsy hahavitana azy,sns.
Misy indray kosa ny zavatra TSY MAIKA saingy mbola tena MANAN-DANJA. Anisan’izany ny fiomanana, ny fahamailona, ny fandaminana isanisany, ny fandalinana ny fifandraisana, ny fialam-boly, sns.
Misy kosa ireo zavatra MAIKA nefa dia matetika tsy MANAN-DANJA firy. Ao anatin’izany ohatra ireo fanakorontanana madinika, ny fivoriana tsy dia misy dikany, ny antso voaray atao nefa tsy dia maika akory ary ny olana madiniky ny hafa.
Ny farany moa izany dia ireo zavatra sady TSY MAIKA no TSY MANAN-DANJA koa. Tafiditra ao anatin’izany ny fandaniam-potoana, ny zavatra atao hanalàna andro, ny antso na taratasy na mailaka izay tsy misy fotony, ny fijerena be loatra ny fahitalavina na ny Aterineto na ihany koa ireo fialam-boly amin’ny fotoana tokony hanaovana asa na zavatra hafa.
Tsapa fa tsy misy toerana ho an’ny « RaMoraMora » eto saingy misy fotoana kosa ilaina ny fitsaharana. Ho an’ny finoana Kristianina moa dia tena ilaina tokoa ny fitsaharana io saingy noho ny fahotàna tamin’ny fototra dia noroahina tao Saha Edena RaOlombelona ka ny hatsembohan’ny tava no hihinana. Saingy izao no tadidio, tsy ozona fa fahasoavana ny asa. Ka enga anie samy hahazo ny asa sahaza azy avy isika rehetra.
Ny tiana hamaranana ity fizaram-pahalalàna ity dia ho zaraiko eto ihany koa ireo toetra tsara anànana raha te hifandray sy hifanerasera tsara amin’ny hafa ianao mba hahombiazanao ihany koa :
Voalohany, ataovy aloha izay hahazoanao ny hafa : Aza maika ny hiteny na haneho ny hevitra na ny fomba fijerinao fa aoka ho fantatrao tsara ny momba ny olona miresaka sy miara-miasa aminao ka aorian’izay ianao afaka maneho kokoa izay tianao ambara.
Asehoy ny fahatsorana sy ny fanajanao ny hafa ary indrindra indrindra asehoy fa olona sariaka ianao : Ahoana mihitsy moa no ahafahan’ny hafa miara-miasa amin’ny olona manevateva azy sy tsy hay iaraha-monina ary tsy mifanaja aminy?
tazony hatrany ny teny nomena : eto aloha dia very hatrany ireo mpanao pôlitika fa maro amin’izy ireo no tsy mahatàna ny teny nomena. Aoka ianao tsy ho toa azy ireo fa rehefa « eny » dia « eny » rehefa « tsia » dia « tsia » ary rehefa nilaza ianao fa ho ataonao dia tanteraho araka izay voalazanao.
Mahaiza manaja izay olona tsy eo : matetika mantsy dia misy ireo faly mifosafosa sy manaratsy izay olona tsy eo rehefa mivory na miresaka maromaro kanefa dia misolelaka sy manatsara ery rehefa tsy eo. Ataovy ho toy ny eo hatrany izay olona tsy eo mba tsy hahasolafaka anao satria mety hisy amin’ireo olona manoloana anao no hamadika hitantara izany teny hafahafa nataonao tamin’ilay olona tsy teo
Teneno MAZAVA izay zavatra andrasanao : tadidio fa misy hatrany ny fiovana amin’ny zavatra eritreretinao sy ny teneninao ary ny teneninao sy ny henon’ny olona ay ny henon’ny olona sy ny azony. Ka mba hamerana izany dia saino mazava aloha izay hevitrao ka ambarao mazava arakaraka izay nieritreretanao azy izay. Rehefa mazava amin’ny hafa ny zavatra andrasanao aminy dia mora ho azy ireo koa ny hanatanteraka izany
Mahaiza mamela heloka : ny olombelona rehefa dia tsy misy tsy diso. Ny tanjontsika dia ny hahatsara ny fiaraha-monina ka tsara atombontsika amin’ny tenantsika izany. Somary manahirana io satria ho very ihany koa raha mamela heloka isaky ny mandeha izao saingy ilaina izany ary ilaina ihany koa no mampahafantatra ilay olona diso tamin’ny tena ny lesoka nataony mba hahazoany lesona amin’izany ary iezahany tsy hamerenana azy intsony
Izay aloha ny tafatafa momba io. Maro ny fahalalana fanampiny fonosin’izy io ary mbola maro ihany koa ny tohiny fa ireo sokajy ireo no ampiharo ary ho hitanao fa hivoatra ny fahazaranao mba ahafahanao misonga hatrany.
Waow! @ teny gasy, misaotra a! Ento miakatra ity firenena ity 🙂
Misaotra e. Mila ifampizarana ny fahalalana fa tsy tsara raha tazonina ho an’ny tena irery satria tena nanampy tokoa.
Variana amin’ny fitadiavana ny olona dia mety tsy miraharaha loatra kanefa mety vao mainka hanohana bebe azy kokoa ito resaka atsipy ito 😉